RASMI: Tababaraha ku guuleystay abaal-marinta Macallinka bisha July ugu fiicnaa horyaalka Premier League oo la shaaciyey – Gool FM
(London) 08 July 2020. Tababare Ralph Hasenhuttl ayaa noqday tababarihii ugu dambeeyey ee ku guuleystay abaal-marinta macallinka bisha ugu fiicnaa horyaalka Premier League xilli ciyaareedka 2019-2020 kaddib markii uu guuldarro la’aan ku hoggaamiyey kooxdiisa Southampton bishii dhammaatay ee July.
Saints ayaa guul 1-0 ka gaartay Manchester City, waana mid ka mid ah kooxaha waa weyn ee ay dhibcaha ka qaateen kaddib markii dib loo bilaabay horyaalka, waxaana ay Old Trafford ay dhibcaha kula soo qeybsadeen Manchester United kulan ku dhammaaday barbaro 1-1.
Bishii July sidoo kale kooxda Macallin Hasenhuttl ayaa barbaro la gashay Kooxaha Everton iyo Brighton ka hor inta aysan horyaalka ku dhammaysan guul ay ka gaareen Kooxaha Bournemouth iyo Sheffield United.
Hasenhuttl ayaa tartanka abaal-marintan ku garaacay Tababarayaasha kale ee kula tartamayey ee kala ah; Jurgen Klopp, Pep Guardiola, David Moyes, Jose Mourinho iyo ku guuleystaha abaal-marintan bishii June ee Ole Gunnar Solskjaer.
Dhinaca kale Weeraryahanka Kooxda West Ham United ee Michail Antonio ayaa ku guuleystay abaal-marinta xiddiga bisha July ugu fiicnaa horyaalka Premier League kaddib markii uu dhaliyey 8 gool hal gool oo kalena caawiye ka ahaa intii lagu guda jiray bishaas.